ရွှေဝါရောင် လှုပ်ရှားမှု ၂-နှစ်ပြည့်ပြီ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၀၇ ခု စက်တင်ဘာလက ပြည်သူလူထု ဆင်းရဲ ဒုက ကင်းဝေးစေဘို့ သံဃာတော်များက ငြိမ်းချမ်းစွာ မေတ္တာပို့ ဆုတောင်းရင်း လှည့်လည် လမ်းလျောက်ကြတာကို စစ်အစိုး၇က အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းခဲ့တာ ၂ နစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပါပြီ။ ရှစ်လေးလုံး လူထုအရေးတော်ပုံ နောက်ပိုင်းမှာ အကြီးဆုံး အုံကြွမှုဖြစ်တဲ့ ရွှေဝါရောင် သံဃာနဲ့ လူထု လှုပ်ရှားမှု အထူးအစီအစဉ်များကို စုစည်းတင်ဆက်ထားပၝတယ်။
ေ႟ဝြၝရောင် သံဃိာံငြ့် လူထု လပ်ြရြားမြ အထတ်ြအထိပ်ကာလူဖစ်သော ၂၀၀၇ခိုံစြ် စက်တင်ဘာ ၂၅ရက်နေႛက ရန်ကုန်္ဘမြိႚလယ်္ဘမြိႚတော်ခန်းမရြေႚတငြ် စုဝေးလာသည့် လူထုဋ္ဌကီးအား သံဃာတပၝးက အသံခဵဲႚစက်ဋ္ဌကီူးဖင့် စကားေူပာုကားနေပုံဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP)
ေ႟ဝြၝရောင်ိံစ်ြပတ်လည် အထိမ်းအမတြ် (၁)
ေ႟ဝြၝရောင် သံဃာ့ လပ်ြရြားမလြိုႛ လူသိုကတဲ့ ၂၀၀၇ ခိုံစြ် စက်တင်ဘာလက သံဃာတြေ မေတ္ဇာပိုႛ့ ကခဵီုကတဲ့ အခဵိန်မြာ စစ်တပ်က ပစ်ခတ်လိုႛ ရဟန်းရင်ြလူတြေ ထိခိုက်သေကေဵခဲ့သလို အဲဒီ နောက်ပိုင်းကစ္ဘပီး ဒီကနေႛအထိ သံဃာတေကြို စစ်အစိုးရက ဆက်တိုက် ဖမ်းဆီးထောင်ခဵနေပၝတယ်။
ဒီသံဃာတေထြဲမြာ အရင်က စစ်သားတြေူဖစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ သံဃာတြေ ပၝဝင်နေရာမြာ သံဃာ့ လပ်ြရြားမြ ဦးဆောင် သံဃာတပၝူးဖစ်တဲ့ အရငြ် ဂမႝီရလည်း တဦးအပၝအဝင်ူဖစ်ပၝတယ်။ အဲဒီလိုပဲ သံဃာ့ဥသ္တွောင်အဖြဲႚရဲ့ ထိုင်ိးုိံင်ငံဆိုင်ရာ ဥက္ကှူ ဦုးသဘာသဆိုရင်လည်း အရင်က သူရဘြဲႚခဵီူးမၟင့်ခံခဲ့ရတဲ့ တပ်မတော်သား တဦူးဖစ်ပၝတယ်။
ေ႟ဝြၝရောင် သံဃာ့ လပ်ြရြားမြ ၂ိံစ်ြပတ်လည်ခဵိန်မြာ အဲဒီအခဵိန်က သံဃာလပ်ြရြားမမြာ ပၝဝင်ခဲု့ကတဲ့ သံဃာတေအြေုကာင်း တစေ့တစောင်းနဲႛအတူ သံဃာတေအြပေၞူမန်မာစစ်တပ်က စစ်အရာရြိတြေ တပ်သားတေရြဲ့ သဘောထားနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး စစ်သည်တေရြဲ့ေူပာူပခဵက်တြေ၊ ရဲဘော်ဟောင်း တူဖစ်လဲ သံဃာတေရြဲ့ စစ်တပ်တငြ်း အတြေႚအုကံတြေကြို တင်ူပပေးပၝမယ်။
အစီအစဉ် အပိုင်း (၁) မြာ ဦးဆောင်သံဃာ အရင်ြဂမႝီရရဲ့ ဘဝအေုကာင်း နားဆင်ိုိံင်ပၝတယ်။ ဒေၞနန်းခမ်းထြေးက တင်ူပထားပၝတယ်။
ေ႟ဝြၝရောင်ိံစ်ြပတ်လည် အထိမ်းအမတြ် (၂)
ေ႟ဝြၝရောင်သံဃာ့လပ်ြရြားမြ အမတ်ြတရ အစီအစဉ် အပိုင်း (၂) မြာ ဦးဆောင် သံဃာတပၝူးဖစ်သူ အရငြ် ဦုးသဘာသနဲႛ တြေႚဆုံမေူးမန်းခဵက်တေထြဲကေ႟ဝြၝရောင် သံဃာ့လပ်ြရြားမြ မအောင်ူမင်ခဲ့ရတဲ့အပေၞ သုံးသပ်ခဵက်တေနြဲႛ မတူညီတဲ့ တပ်မတော်တေအြေုကာင်း နားဆင်ိုိံင်ပၝတယ်။ ဒေၞနန်းခမ်းထြေးက တင်ူပထားပၝတယ်။
ေ႟ဝြၝရောင်ိံစ်ြပတ်လည် အထိမ်းအမတြ် (၃)
ေ႟ဝြၝရောင် သံဃာ့လပ်ြရြားမြ အမတ်ြတရ အစီအစဉ် အပိုင်း (၃) မြာ သံဃာ့ဥသေဵြာင်အဖြဲႚရဲ့ ထိုင်ိးုိံင်ငံဆိုင်ရာ ဥက္ကှူ အရငြ် ဦုးသဘာသနဲႛ တြေႚဆုံ မေူးမန်းခဵက်တေထြဲက သူရဘြဲႚ ရရြိခဲ့တဲ့ တိုက်ပြဲအေုကာင်းနဲႛအတူ အရငြ် ဦုးသဘာသရဲ့ ရဲဘက်စခန်းက အတြေႚအုကြံ အေုကာင်း နားဆင်ိုိံင်ပၝတယ်။ ဒေၞနန်းခမ်းထြေးက တင်ူပထားပၝတယ်။
ေ႟ဝြၝရောင်ိံစ်ြပတ်လည် အထိမ်းအမတြ် (၄)
ေ႟ဝြၝရောင် သံဃာ့လပ်ြရြားမြ အမတ်ြတရ အစီအစဉ် အပိုင်း (၄) မြာ သံဃာ့ဥသ္တွောင်အဖြဲႚရဲ့ ထိုင်ိးုိံင်ငံဆိုင်ရာ ဥက္ကှူ အရငြ် ဦုးသဘာသနဲႛ တြေႚဆုံ မေူးမန်းခဵက်တေထြဲက စစ်အရာရြိတခဵြိႚရဲ့ အုကမ်းဖက် ရမ်းကားမတြေနြဲႛ ပတ်သက်တဲ့ အတြေႚအုကံအြေုကာင်း ဒေၞနန်းခမ်းထြေးက တင်ူပထားပၝတယ်။
ေ႟ဝြၝရောင်ိံစ်ြပတ်လည် အထိမ်းအမတြ် (၅)
ေ႟ဝြၝရောင်သံဃာ့လပ်ြရြားမြ အမတ်ြတရ အစီအစဉ် အပိုင်း (၅) မြာူမန်မာစစ်တပ်တငြ်းက စစ်သည်တေရြဲ့ ၂၀၀၇ ခိုံစြ်ေ႟ဝြၝရောင် သံဃာ့လပ်ြရြားမအြပေၞ သဘောထားတြေ အပၝအဝင် တပ်တငြ်း အေူခအနေတခဵြိႚကို ဒေၞနန်းခမ်းထြေးက တင်ူပထားပၝတယ်။
သံဃာ့လပ်ြရြားမအြပေၞ စစ်သည်မဵား၏ သဘောထား။
လန်ြခဲ့တဲ့ ၂ဝဝ၇ ခုနစ်ြကူမန်မိာိုံင်ငံမြာ မုကံဖြူးလောက်အောင် ကုန်စေဵိးံနြ်းတြေူမင့်တက်လ္ဘာပီး စားဝတ်နေရေး ကဵပ်တည်းလာတဲ့အတကြ် အစိုးရအနေနဲႛေူဖရငြ်းပေးဖိုႛ ရဟန်းသံဃာတော်တေဟြာ သူတိုႛရဲႛ ကေဵာင်းစာသင်တိုက်တေကြနေ လမ်းမပေၞထက်္ဘြပီး တောင်းဆို လပ်ြရြားခဲု့ကပၝတယ်။
၈၈ မဵြိးဆက် ကေဵာင်းသားခေၝင်းဆောင်တြေူဖစ်တဲ့ မင်းကိုိုံင်၊ ကိုကိုကီးအပၝအဝင် ကုန်စေဵိးံနြ်း ကဵဆင်းရေးအတကြ် ဦးဆောင်လပ်ြရြားသူ ကိုထင်ကေဵာ်တိုႛ ဓာတ်ဆီစေဵး လ္တွော့ခဵဖိုႛ တောင်းဆို လပ်ြရြားမတြေေုကာင့် ၂ဝဝ၇ုသဂုတ်လမြာ အဖမ်းခံရ္ဘပီးနောက်ပိုင်း စစ်တေနြဲႛ ပခုက္က္ဘြမြိႛက သံဃာတော်တေကြ လမ်းမပေၞတေထြက်္ဘြပီး မေတ္ဇာပိုႛဆုတောင်း လမ်းလ္တွောက်ရင်းနဲႛ ကုန်စေဵိးံနြ်း ကဵဆင်းဖိုႛ တောင်းဆိုခဲု့ကပၝတယ်။ ဒၝပေမယ့် အာဏာပိုင်တေကြ သံဃာတော်တေရြဲႛ ဆိံ္ဋူပမတြေကြို အုကမ်းဖက်္ဘဖိခြဲခြဲ့ပၝတယ်။ အဲဒီမြာ ပခုက္က္ဘြမြိႛက အာဏာပိုင်တေရြဲႛ လုပ်ရပ်ဟာ အဆိုးရြားဆုံူးဖစ်ခဲ့ပၝတယ်။
အဲဒီလို စစ်တပ်က အုကမ်းဖက်ြိံမ်နင်းခဲ့တဲ့အပေၞမြာ သံဃာထုတရပ်လုံးသာမကူပည်သူတေပြၝ မခံရပ်ိုံင်အောင်ူဖစ်ခဲု့ကပၝတယ်။ ဒၝေုကာင့် ဗုဒ္ဌဘာသာ ထနြ်းကားတဲူ့မန်မိာိုံင်ငံမြာ သာသနာတော်အတကြ် အိံ္ဇရာယ်ကဵရောက်န္ဘေပီလိုႛ သံဃာတော်တေဘြက်ကူမင်လာုကတဲ့အတကြ် စက်တင်ဘာလ (၉) ရက်နေႛမြာူမန်မိာိုံင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေၝင်းစုဋ္ဌကီးကို ဖြဲႛစည်းလိုက်္ဘပီး ဝိနည်းတရားတော်နဲႛအညီ သာနာတော်ကို ကာကယ်ြဖိုႛ ဆုံူးဖတ်ခဲု့ကပၝတယ်။
ရေဝြၝရောင် သံဃာ့လပ်ြရြားမဋ္ဌြကီိးံစြ်ိံစြ်ူပည့် အထိမ်းအမတြ် အထူးအစီအစဉ်အူဖစ် အဆုံးမသတ်သေးသော ရေဝြၝရောင်တော်လန်ြရေး ခေၝင်းစဉ်နဲႛ မအင်ုကင်ိးိုံင်က အပိုင်း (၂) ပိုင်းခ္ဘြဲပီး စီစဉ် တင်ဆက်ထားပၝတယ်။
ရေဝြၝရောင်တော်လန်ြရေး (၂)ိံစြ်ူပည့်ကာလ
၂ဝဝ၇ ခိုံစြ် ရေဝြၝရောင်တော်လန်ြရေးအ္ဘပီးမြာ တော်လန်ြရေးဋ္ဌကီးအတငြ်း ပၝဝင်ခဲ့တဲ့ ရဟန်း သံဃာတော်တေထြဲက တခဵြိႛူပည်ပကို တိမ်းရြောင်သြားခဲ့ရသလို၊ ဦးဂမ္တီရ အပၝအဝင် ဦးဆောင်သံဃာတော် အမဵားအူပားဟာလည်း ရဲဘက်စခန်းနဲႛ နယ်ဝေးအကဵဉ်းထောင် အသီးသီးမြိာံစ်ြရည်ြထောင်ဒဏ်တြေ ခဵမတ်ြခံထားရပၝတယ်၊၊ ထိန်းသိမ်းထားရာကူပန်လတြ်ေူမာက်လာတဲ့ သံဃာတော်တေဟြာ အာဏာပိုင်တေရြဲႛ ဖိအားပေးထားမြေုကာင့် မူရင်းကေဵာင်းတိုက်တေမြာ သြားရောက် သီတင်းသုံး နေထိုင်ခငြ့်မရတဲ့အတကြ် အခက်အခဲတေနြဲႛုကံနြေုကရတယ်လိုႛ သိရပၝတယ်၊၊ ရေဝြၝရောင်တော်လန်ြရေး (၂)ိံစြ်ူပည့်ကာလမြာ သံဃာတော်တြေုကံတြေႛနေရတဲ့ နောက်ဆုံးအေူခအနေ၊ူမန်မာူပည်တငြ်းက လက်ရြိ သံဃာ့လပ်ြရြားမြ၊ အာဏာပိုင်တေနြဲႛ ရဟန်းသံဃာတော်တေအြုကား ဆက်ဆံရေး အေူခအနေ၊ အလားအလာတေနြဲႛ ပတ်သက်လိုႛူပည်တငြ်းကူမန်မိာုိံင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေၝင်းစုအဖြဲႛရဲႛ ဦးဆောင်ဆရာတော် အရင်ြဓမ္ထဝံသကို အာရ်အက်ဖ်အေ အဖြဲႛသား ကိုကေဵာ်ကေဵာ်အောင်က ဆက်သယ်ြမေူးမန်းထားပၝတယ်၊၊
WFP ဒုက္ခသည်အကူအညီ စစ်တွေ ရွှေစေတီဆရာတော်ငြင်းပယ်
We have to proceed with similar supporting the REVOLUTION of the Democracy by so many ways. The shooting after they allowed the permit to praying Buddha on 27-09-2007. But they killed Japanese Reporter and arrested the nearest protectors at that time. So, Monks, Students, Workers, Farmers and Public and Parties must connect hand to hand for our future also. The Military Government is still cheating the Public.